विप्लवको नेपाल बन्द : कहाँ के भयो ? « NagarikTimes
विप्लवको नेपाल बन्द : कहाँ के भयो ?
३० फाल्गुन २०७५, बिहीबार १२:२५
काठमाडौँ : नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपाले आह्वान गरेको नेपाल बन्दका क्रममा देशका विभन्न स्थानमा बम आतंकसँगै आगजनीका घट्ना भएका छन् ।
विप्लवका कार्यकर्ताले कैलाली, नवलपरासी र मकवानपुर लगायतका जिल्लामा ट्रक, बस र ट्याक्टरमा आगजनी गरेका हुन् । नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता (एसएसपी) उत्तम सुवेदीका अनुसार कैलालीमा एउटा बसमा आगजनी र एउटा ट्रक तोडफोड भएको छ भने नवलपरासी र मकवानपुरमा ट्रक तोडफोड भएको छ ।
त्यस्तै रौतहट, नवलपरासी, पोखरा प्युठानमा शंकास्पद बस्तु भेटिएपनि कुनै मानविय क्षती भएको छैन । प्रहरीले वुटवल, दाङ, सिन्धुपाल्चोक र बाँकेको नेपालगञ्जमा भेटिएका शंकास्पद बस्तु निश्कृय बनाएको जनाएको छ ।
जन्ती बोकेको बसमा आगजनी :
कैलालीमा विवाहका जन्ती बोकेको बसमा समेत आगजनी भएको छ । म १ ख ४४१ नम्बरको विवाहको गाडिमा आगो लगाईएको हो । त्यस्तै कैलालीबाट सार्वजनिक सवारी साधन रोकिरहेका विप्लव समूहका तीन जनालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ ।
कैलालीका प्रहरी उपरीक्षक आभुषण तिम्सिनाले गोदावरी नजिकबाट तीन जनालाई नियन्त्रणमा लिएको जानकारी दिए । कैलालीको घोडाघोडी नगरपालिकास्थि साडेपानीमा ट्रक, गौरीगंगा नगरपालिका बडैपुरर राजिनपुरबीच एउटा बसमा आगजनी गरिएको छ । त्यसैगरी धनगढी उपमहानगरपालिकाको राजपुरमा ट्रकमा आगजनी भएको छ भने लम्कीमा एक ट्याक्टरका लगाएको आगो प्रहरीले निभाएको जनाएको छ ।
त्यस्तै, नवलपरासीको बासाबसहीमा गएराति २ वटा ट्रकाममा आगजनी भएको छ । बासाबसही नजिक रहेको स्टिल कम्पनीमा रड लिन आएका खाली ट्रकमा आगजनी गरेको प्रहरीले जनाएको छ, भने उता, मकवानपुरको थाहा नगरपालिका-४, नयाँगाउँमा गएराति नै एक ट्रकमाथि आगजनी गरिएको छ ।
काठमाडौंबाट हेटौंडातर्फ जाँदै गरेको ना ५ ख ७४११ नम्बरको हेभी इक्वीपमेन्ट बोक्ने ट्रेलर गाडीमा पनि आगजनी भएको छ । आगजनीका कारण ट्रक पूरै जलेको छ । प्रहरीका अनुसार गएराति १२ बजे आगजनी भएको हो । त्यसैगरी देशका विभिन्न स्थानमा बम तथा शंकास्पद बस्तुहरु पनि भेटिएका छन् । जसले गर्दा सर्वसाधारण त्रसित बनेका छन् । प्रहरीका अनुसार बुटवल, प्युठान, वाजुरा, कपिलबस्तु, गोरखा, रुकुमा लगायतका जिल्लामा बम तथा शंकास्पद बस्तु भेटिएका छन् ।
बुटवलमा हाते बम :
बिहिबार विहान बुटवल-भैरहवा सिद्धार्थ राजमार्ग अन्तर्गत बुटवलको कालिकानगरमा डिभाईडरमाथि कालो रंगको शंकास्पद बस्तु फेला परेको हो । उक्त बस्तुलाई प्रहरीले बम भएको र प्रहरीले निस्क्रिय गरेको इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलका प्रहरी नायब उपरीक्षक (डिएसपी)डिलबहादुर मल्लले जानकारी दिएका । मल्लले आतंक फैलाउन हाते बम राखेको बताए ।
गोरखा बजारमा बम :
जिल्ला अदालत अगाडि शंकास्पद बस्तु :
काठमाडौँको घट्टेकुलोमा शंकास्पद बस्तु :
सुचनामा सुरक्षाकर्मीलाई आफ्नो ज्यान, हतियार, कार्यालय, युनिटको सुरक्षा रणनीतिसहित सतर्क रहन पनि भनिएको छ । बताइएअनुसार चन्द समूहका नेता-कार्यकर्तालाई पछ्याउने, तर्साउने र मनोवैज्ञानिक दबाबमार्फत वार्तामा ल्याउने सरकारको रणनीति रहेकाले त्यसअनुसारका गतिविधि गर्ने सुरक्षा निकायको आन्तरिक सर्कुलर छ ।
प्रहरी प्रवक्ता भन्छन् सुरक्षा समस्या छैन :
प्रकाशित मिति: ३० फाल्गुन २०७५, बिहीबार १२:२५